Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii ugu dambaysay ee xarunta Dhexe ee JWXO iyo faahfaahinta Guulihii CWXO
Warbixintii ugu dambaysay ee xarunta Dhexe ee JWXO iyo faahfaahinta Guulihii CWXO
Posted by ONA Admin	/ October 15, 2014
Warbixitii ugu dambeeyay een ka helnay Xarunta Dhexe ee JWXO ayay kaga xogwarameen dagaallo badan oo naftood hurayaasha CWXO ay ku qaadeen fadhiisamada ciidamada gumaysiga Itoobiya ku dhex maray meela ay ka samaysteen meela kamid ah dalka. Sidoo kale kamiino loo dhigay gaadiidka ciidanka gumaysiga ayaa khasaare laxaadleh loogu gaystay ciidankii saarnaa. Dagaalada aan helnay warbixintooda oo socday 10kii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa cadawga lagaga dilay ugu yaraan 54 askari oo darajooyin kala duwan lahaa iyadoo dhaawac badanna ay kala tageen goobaha dagaalka. Sidoo kale waxay warbixinta xarunta Dhexe sheegtay in xeryo uu cadaga ku lahaa degaanka Fiiq cagta la mariyay. Dagaaladaa ayaa waxay udhaceen sidan;
23/9/14 Caribaradhoos oo dagmada Dhagaxmadow ee Gobolka Jarar ka tirsan dagaal ka dhacay waxaa ciidanka gumaysiga Itoobiya lagaga dilay 2 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
3/10/14 Waabdhuure oo Dhagaxbuur katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka saama laluudka ah ee gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare naf iyo maalba leh oo aah lasoo faahfaahinin.
3/10/14 Balisareedo oo Gunagado katirsan kamiin ay CWXO ka xidheen waxay ku holciyeen 1 baabuur oo guwa cadawga ah waxaana inta lahubo ku bakhtiday 15 askari 20 kalana waxaa kasoo gaadhay dhaawacyo halis ah.
3/10/14 Kugta oo Dhagaxmadow katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagag dilay 2 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
4/10/14 Goldhiilo oo Dhagaxbuur katirsan weerar gaadma ah oo ay CWXO ku qaadeen waxay ku dileen 1 askari.
5/10/14 Qudhaclay oo Dhagaxbuur katirsan kamiin ay CWXO kaxidheen waxaa soo galay ciidan uu cadawgu leeyahay waxayna qudha kaga jareen 10 askari 12 kalana waa lagaga dhaawacay.
6/10/14 Fiiq weerar habeenimo oo dhowr jaha ah oo ay CWXO ku qaadeen waxay ku burburiyeen 3 xero oo ay ciidamada cadawga iyo cawaantoodu daganaayeen waxaana lagu gaadhsiiyay khasaare aan wali lafaahfaahinin.
6/10/14 Sagag oo Nogob katirsan mir habeenimo oo ay CWXO kafuliyeen waxay ciidanka gumaysiga kugaadhsiiyeen khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
6/10/14 Karinbarkhadle oo Sagag katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 3 askari tiro aan laxaqoojinin na waa lagaga dhaawacay.
7/10/14 Dul-amaan oo Baabili katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga loogu gaystay khasaare aan lasoo faahfaahinin.
7/10/14 Jeexdin oo Gobolka Qoraxay katirsan weerar 3 jaho ah oo ay ciidanka wadaniga xoraynta Ogadenia ku qaadeen waxay ku burburiyeen fadhiisimo dhowr ah oo ay ciidanka cadawgu lahaayeen waxaana cadawga soo gaadhay jab iyo halaag culus.
9/10/14 Qudhacmaydal oo Dagmaga Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob kamiin ay CWXO kaxidheen waxay kugubeen 1 baabuur oo kuwa dagaalka ah waxaana ku baaba’ay ciidan xoogleh oo saaraa.
9/10/14 Labakoorgudub oo Fiiq katirsan jidgooyo ay cwxo kasameeyeen waxay ku holciyeen 1 baabuur oo kuwa ay ciidanka cadawgu adeegsadeen ah waxaana ku halaagsamay ciidan badan oo uu cadawgu leeyahay.
10/10/14 Ceelgaab oo Dhagaxmadow katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
11/10/14 Daakhatoyaray oo Fiiq katirsan weerar ay Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia kuqaadeen kuwa gumaysiga Itoobiya waxaa inta lahubo cadawga laga dilay 18 askari waxaana laga dhaawacay askar aad ubadan oo aan wali lafaahfaahin waxayse owr kula tageen 8 askari oo aad u ildaran sidoo kala waxaa cwxo gacanta ugalay hub iyo saanad kale oo aad ubadan.
12/10/14 Axmadsahal oo Fiiq katirsan waxaa ciidanka wayaanaha lagaga gubay 1 gaadhi oo Uuraal ah ciidanbadana ay ku leedeen.
13/10/14 Sagag oo Gobolka Nogob katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka daalan ee gumaysiga lagaga dilay 5 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.